एल् काउउलो बीच, कोस्टा डेल सोलमा सबैभन्दा सुन्दर मध्ये एक यात्रा समाचार
एल Cañuelo बीच
लुइस मार्टिनो | | Ecotourism, समुद्र तटहरू
निस्सन्देह, एल काउउलो समुद्र तट यसमा सबैभन्दा सुन्दर मध्ये एक हो कोस्टा डेल सोल। यो मालागा नगरपालिकामा अवस्थित छ नेरजायद्यपि यो उसको अन्तिम बालुवा क्षेत्र हो, जुन पहिले नै छिमेकीको सीमामा छ ग्रेनाडा प्रान्त.
तर यस समुद्री तटको आकर्षण यसको प्रभावशाली प्राकृतिक वातावरण हो, त्यो मारो-सेरो गोर्डोको चट्टानहरू। यस शानदार परिदृश्यको कारणले, यसको राम्रोसँग ज्ञात एक्सेसहरू छैनन्, यद्यपि तपाईं कारबाट यसको नजिक जान सक्नुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा यसले यसको अर्को आकर्षण दिन्छ: यसले मालागा तटमा अन्य बलौटे क्षेत्रहरूको भीडबाट पीडित भएको छैन। यदि तपाईं एल काउउलो समुद्र तट अझ राम्ररी जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई पढ्न जारी राख्न प्रोत्साहन दिन्छौं।
1 एल Cañuelo समुद्र तट, एक सुविधाजनक प्राकृतिक वातावरण
2 एल Cañuelo बीच सेवाहरू
3 कसरी एल Cañuelo बीच पुग्ने
4 एल Cañuelo समुद्र तट वरिपरि के हेर्ने?
4.1 नेरजा गुफा
4.2 युरोपको बाल्कनी
4.3 हर्मेटेज र गिर्जाघरहरू
4.4 सिभिल आर्किटेक्चर
4.5 इतिहास संग्रहालय
एल Cañuelo समुद्र तट, एक सुविधाजनक प्राकृतिक वातावरण
पनि भनिन्छ कोभ एल Cañueloयो समुद्री किनार मात्र तीन सय पचास मिटर लामो चौडाईमा छ। जस्तो कि हामीले तपाईंलाई भनेको थियौं, मारोको प्रभावशाली चट्टानहरूले यसलाई चारैतिर घेरेको छ। यी उचाईहरू हुन् जुन केही स्थानहरूमा दुई सय पचास मिटर उचाईमा पुग्छन् र यसले अन्तिम पाउहरू निर्माण गर्दछ अल्हामा, तेजेडा र अल्मिजाराको पहाडहरू.
तसर्थ, तपाईं यस क्षेत्रमा अन्य सुन्दर समुद्री किनारहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ती मध्ये, कि अल्बेरक्विला को लहर Cantarriján, पछिल्लो नग्नतावाद को लागी। यदि तपाईंसँग मौका छ भने, समुद्रबाट यो असहज ठाउँको आनन्द लिनुहोस्। नेभिगेसन समुद्र तट क्षेत्रमा तटबाट दुई सय मिटरको दूरीसम्म र अन्य भागहरूमा पचास मिटरसम्म अनुमति छ।
फलस्वरूप, समुद्रबाट तपाईंले प्रभावशाली चट्टानहरूको आनन्द लिनुहुनेछ र तपाईं पनि जस्तो प्रजातिहरू भेट्टाउन सक्षम हुनुहुनेछ आनुवंशिक वा पहाड बाख्रा, जो पहाडबाट तल आउँदछ। र तपाईं पनि देख्नुहुनेछ Kestrels, पेरेग्रीन फाल्कन y पहेंलो खुट्टा भएको समुद्री डाँठहरू.
एल Cañuelo समुद्र तट र मारो चट्टानहरु
एल Cañuelo बीच सेवाहरू
पृथक क्षेत्रमा भए पनि, यस बलुवा क्षेत्रले प्रस्ताव गर्दछ सबै सेवाहरू तपाईंले समुद्र तटमा एक सुन्दर दिनको आनन्द लिन आवश्यक छ। यसमा कारहरूको लागि पार्कि has छ, यद्यपि यो पहाडको शीर्षमा अवस्थित छ। यो संरक्षित क्षेत्र भएकोले तपाईंले पैदल समुद्रको किनार पहुँच गर्नुपर्नेछ। यद्यपि त्यहाँ एउटा बस सेवा छ जुन तपाईंलाई समान बालुवा क्षेत्रमा छोड्छ।
यसमा सार्वजनिक शौचालय र वर्षा र लाइफगार्ड उपकरणहरू छन्। थप रूपमा तपाईसँग दुईवटा पिकनिक क्षेत्र छन् जहाँ तपाई नुहाए पछि तपाईको ब्याट्री रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ।
यसको पानी क्रिस्टल स्पष्ट छन् र तपाइँ स्कुबा डाइभि practice अभ्यास गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। यसको समुद्री किनार साँच्चिकै दर्शनीय छ। यसमा तपाईले देख्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि, कोरल सुन्तला, लुप्तप्राय प्रजाति। यदि तपाईं यसमा मध्यम सूती थप्नुहुन्छ भने, यो कभमा तपाईंको नुहाउने आनन्द हुनेछ। यसको अंशको लागि, एल काउउलो समुद्र किनारका बालुवाहरू सेता छन् यद्यपि यसमा बजार क्षेत्रहरू पनि छन्।
कसरी एल Cañuelo बीच पुग्ने
यस समुद्रीतटमा पुग्ने एक मात्र तरीका हो राजमार्ग। नेरजाबाट गर्नका लागि तपाईले लिनु पर्छ N-340 Almuñécar को दिशा मा र त्यसपछि लिनुहोस् 402 बाट बाहिर निस्कनुहोस्। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं अल्मेर्वा जाने नयाँ राजमार्गमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई बाहिर निस्कनु पर्छ ला हेर्राडुरा र आफ्नै लिनुहोस् N-340, तर दिशामा मलागा.
तपाईं चट्टानको शीर्षमा पुग्नुहुनेछ। तपाइँको कार त्यहाँ छोड्नुहोस् र लिनुहोस् बस समुद्र तटमा तल जान। राउन्ड ट्रिपको लागि यसको मूल्य प्रति व्यक्ति दुई युरो हो।
एल Cañuelo समुद्र तट वरिपरि के हेर्ने?
हामीले अघि नै वर्णन गरिसकेका छौं, यो कोभ १irteen किलोमिटरबाट अवस्थित छ नेरजा, कोस्टा डेल सोलको सब भन्दा सुन्दर शहरहरू मध्ये एक। त्यसैले, हामी तपाईंलाई यो सल्लाह दिनको बीचमा आफ्नो दिनको फाइदा लिन सल्लाह दिन्छौं।
एल Cañuelo बीचको अर्को दृश्य
नेरजाको पहिलो बसोबास करीव बत्तीस हजार वर्ष पहिलेको मिति लेखिएको छ। वास्तवमा यसको ठूलो आकर्षण मध्ये एक यसको प्रसिद्ध गुफामा रहेको गुफा चित्रहरू पनि हो। हामी तपाईलाई यो सुन्दर मालागा शहरमा देख्न सक्ने सबै कुरा देखाउने छौं।
मा पाइन्छ Maroठीक, काउउलो बीचको एकदम नजीक। यो छ सांस्कृतिक रुचि को सम्पत्ति र यससँग धेरै कोठाहरू प्रभावशाली stalactites र stalagmites को साथ छ। थप रूपमा, नियोलिथिक युगका असंख्य भाँडाहरू त्यहाँ भेटिए।
तर, सबै भन्दा माथि, गुफा बाहिर देखिन्छ चित्रहरु जुन हामीले तपाईंलाई बतायौं। वास्तवमा, केहि मोहर प्रतिनिधित्व गर्दछ कि मानवता द्वारा बनाईएको सबैभन्दा पुरानो हुन सक्छ। नेरजा गुफा बनाउने कोठा मध्ये, तपाईं क्याटाक्लिज्म, झरना वा भूतहरू को नाम बाट सुझावहरु को लागी केहि यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ।
यो नामaलाई दिइएको छ दृश्यबिन्दु यसले तपाईंलाई मालागा तटको अनौंठो दृश्य प्रस्ताव गर्दछ। उहाँको नाम द्वारा प्रस्तावित थियो राजा अल्फोन्स XII, जो १ 1885 मा नेरजा भ्रमणको बेला ल्याण्डस्केपबाट मोहित भए। तर बढी उत्सुक मूर्तिलाई समर्पित Chanquete, श्रृंखला 'Verano azul' को पुरानो मछुवा, जो दृश्यको ठीक तल छ।
हर्मेटेज र गिर्जाघरहरू
मालागा शहरको धार्मिक विरासतमा उद्धारकर्ताको चर्च, १ Bar औं शताब्दीको एक बारोक र मुदजेर निर्माण जुन पर्खालका चित्रहरू राख्छ फ्रान्सिस्को Hernández। एकै समय मा सम्बन्धित छ आश्चर्यको चर्च, मारो मा, यसको बिल धेरै सरल छ, जबकि। अन्तमा, हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं भ्रमण गर्नुहोस् लस Angustias को Hermitage, पनि बारोक र एक कपोलाको साथ चित्रहरूका साथ सशस्त्र अलोन्सो क्यानोको ग्रेनाडा स्कूल.
नेरजामा युरोपको बाल्कनी
यो पनि चाखलाग्दो छ कि तपाईं नेरजामा भ्रमण गर्नुहुन्छ Ingenio de San Antonio Abad, मालागा तटमा अन्तिम संरक्षित चिनी कारखाना मध्ये एक। र त्यस्तै Aguila एक्वाइडक्ट, यसको चार फ्लोरहरू कोलाडिला बेंसीमा फैलिएर।
अन्तमा, हामी तपाईंलाई यो सum्ग्रहालय हेर्न सल्लाह दिन्छौं, जहाँ तपाई कुभे डे नेर्जामा भेट्टाउने थुप्रै टुक्राहरू भेट्टाउनुहुनेछ, तर यसको बारेमा जानकारी पनि। हालसालैको इतिहास मालागा शहर बाट। यो Balcón डे यूरोपा देखि धेरै छोटो दूरी मा अवस्थित छ।
अन्तमा, एल Cañuelo बीच यो एक प्रभावशाली प्राकृतिक वातावरण मा बसेको एक सानो बालुवा क्षेत्र हो। अत्यधिक पर्यटन द्वारा भ्रमण गरिएको छैन, यसमा एक दिनले तपाईंलाई अनौंठो समुद्री किनार र यसको बहु सेवाहरूको आनन्द लिन मद्दत गर्दछ। तपाईंको यात्रालाई पूरक बनाउन तपाईं सुन्दर शहरको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ नेरजा, यसको प्रसिद्ध गुफाको साथ। के यो ठूलो योजना होईन?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » Ecotourism » एल Cañuelo बीच
स्पेनमा पर्यटनका प्रकारहरू
कर्डोबाको पाटिओसको भोज